Mareykanka iyo Taalibaan oo la filayo in ay ku dhawaaqaan hesh... | Universal Somali TV
Mareykanka iyo Taalibaan oo la filayo in ay ku dhawaaqaan heshiis xal u ah colaada ka taagan dalka Afghanistan
Dowlada Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa gaaray heshiis muhiim ah oo lagu yareynayo colaada ka taagan Afghanistan, iyadoo la filayo in si rasmi ah loogu dhawaaqo heshiiskan, sida uu sheegay sargaal ka tirsan Taalibaan.
Waxaan gaarnay heshiisyo la xiriira wadaxaajoodka nabada waxaana si rasmi u soo saari doonaa warsaxafadeed la xiriira yareynta colaada ka taagan Afghanistan, ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan taalibaan oo la hadlay Tv-ga Al-Jazeera Arbacada Maanta.
Arintaan ayaa wadada u xaari doonta in si rasmi ah ay Mareykanka iyo Taalibaan qalinka ugu duugaan heshiis nabadeed, oo lagu soo afjarayo dagaalada 18-kii sano ee la soo dhaafay ka socday dalka Afghanistan.
Qorshaha ayaa waxaa ka mid ah in Mareykanka uu ka saaro kumanaan askari oo ka jooga dalkaasi iyo in Taalibaan ay aqbasho wadahadal ay la gasho xukuumada Kabul, loona damaanad qaado sidoo kale amniga saraakiishooda sare oo Mareykanka Beegsanayo.
Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa sheegay talaadadii shalay In Mareykanka uu ku wargaliyay in meel wanaagsan ay marayaan wada xaajoodka ka socda caasimada Dooxa.
Kan-xigaWasaarada Amniga Kenya oo amartay in ...
Kan-horePakistan oo Maxkamadeysay ninkii ka d...
Ciidamada Dowladda oo Mubaarak Ibraahim Iidle ka raadinaya Muqdisho
Sideed qarax oo xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho
Mareykanka: Doorashada Somaliya waa inay waqtigeeda ku dhacdaa
Madaxweynaha Galmudug oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
54,599,740 unique visits